Jabuuti: Qoonsigii Siyaaradda, Qalalaasihii Ka Dhashay, Qaracankii Rasaasta Iyo Qasaaraha Nafeed Ee Rabshadihii Shalay |
Jabuuti: Qoonsigii Siyaaradda, Qalalaasihii Ka Dhashay, Qaracankii Rasaasta Iyo Qasaaraha Nafeed Ee Rabshadihii Shalay
Jabuuti(GNN) Rabshado dhimasho iyo dhaawacba sababay ayaa shalay ka dhacay caasimadda dalka Jabuuti ee Jabuuti, kadib markii ay isku dhaceen dad rayid ah oo goob ku kulansanaa iyo ciidamadda amaanka oo la tacaalayay sidii dadkaa looga kaxayn lahaa goobtaa.
Cumar Cilmi Khayre oo ka mid ah mucaaridka Jabuuti oo la hadlay laanta Afsoomaaliga ee idaacadda BBCda iyo laanta VOA ayaa sheegay in boolisku weerareen dad rayid ah oo siyaaro u fadhiyay, isla markaana ay ku amreen inay goobtaa ka tagaan, balse markay u sheegeen sabab ay uga tagaan in aanay jirin, rasaas lagu riday. “Waxa jiray shicib reer jabuuti ah oo mawliid meel ku dhigaayay, subaxnimaddii afartii ayaa la weeraray, ciidan baa loo diray, dagaal baa lagu bilaabay,dhimasho 19 qof baa dhimasho aan cadaynaynaa. Ma garanayno sababta loo weeraray dadkaa, balse waxaan u malaynayaa in loogu marmarsiinooday inay mucaarad yihiin. Waxaana lagu laayay dadkaa hubkii lagu soo iibiyay cashuurta ay bixiyaan, waxaana ciidamo wata gaadiidka dagaalka,” ayuu yidhi.
Dhanka kale wuxuu xusay in dadku diidan yihiin in Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle mar kale soo laabto, sidaa aawadeedna falkaa loogu jawaabayay. “Ninkaasi inuu sii haysto wadanka ayuu doonayaa, walaaloow doorasho dambe ha gelin ee naga tag baa laga yidhi, si uu wadanka u sii haysto ayaa dhibtan keentay. Bishan sadexdii ilaa maanta dalka rabash baa ka socda, in aan meelo u baxno oo shirar qabano ayaa naloo diiday,”ayuu yidhi Cumar Cilmi.
Wuxuu intaa ku daray in dadka rayidka ahi aanay haysan hub, balse ay tuurayeen dhagxaan. Wuxuu intaa ku ladhay in hal askari oo dhanka booliska ka dhaawacmayna uu ku dhintay dhagax. “Askari waa dhaawacmay, dhagax buu ku dhintay, laakiin shacabku ma haystaan hub, ma haystaan biro ee dhagax bay tuurayeen,” ayuu yidhi Cumar Cilmi. Dhanka kale wuxuu sheegay in la weeraray xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka sadex ka mid ahna la dhaawacay, kuwaasoo uu magacyaddooda ku kala sheegay, Cabdiraxmaan Maxamed, Geeddi Siciid Xuseen iyo Axmed Yuusuf.
Taliyaha Booliska Cabdillaahi Cabdi Faarax oo isna dhankiisa u waramay idaacadda BBC laanteeda afsoomaaliga ayaa sheegay in rabshadahaa dhacay ay ka dambeeyeen rag siyaasiyiin ah, oo uu xusay inay doonayaan inay dalka qas geliyaan. “Dad maskaxda loo geliyay dawlada la dagaalamo, rag siyaasiyiin oo dalka fawdo ka wada weeye. Indhahayga kuma arag dad dhintay, laakiin rasaas ayay ku rideen Booliska, anaguna waanu ugu jawaabnay, waan u adkaysan waynay, anigaa laysku dayay in lay dilo ilaahay baa i garab mariyay.” Taliyuhu wuxuu intaa ku daray, in dad reernimo lagu soo abaabulay oo siyaasiyiin mucaarad ahi soo kiciyeen ay meel isugu tageen, kadibna loo sheegay inay meeshaa ka tagaan, balse ay ka dhega adaygeen, ciidanku markuu u tagayna ay rasaas ku soo rideen. Taliyuhu wuxuu sheegay inay Booliska kaga dhaawacmeen 36 askari oo uu ku jiro nin sarkaal ahi, isla markaana wuxuu ka gaabsaday inuu sheego tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay ama ku dhaawacmay falkaa, hase yeeshee wuxuu xusay in dadkii dhaawacmay ay geeyeen cusbatalka. “Ragga waxa yidhi waa siyaasiyiinta, anigu ma arag cid dhimatay, balse ciidanka 36 baa ka dhaawacmay, oo sarkaal ku jiro oo midi kelida laga geliyay. Waa dad la soo abaabulay oo reer baadiye u badan iyo askartii shaqada ka tagtay oo la soo hubeeyay, lacag la soo siiyay dagaalama lagu yidhi.” ayuu yidhi Taliye Cabdillaahi Cabdi Faarax. Dhanka kalena wuxuu xusay in talaabo adag laga qaadi doono ciddii rabshadahaa ka dambaysay oo uu u nisbeeyay siyaasiyiinta mucaaridka ah ee diidan in mar kale Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku soo laabto kursiga.
Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Gudaha dalka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegtay in tobaneeyo qof oo is urursaday oo hubaysani ay bilaabeen rabshada, isla markaana ay rasaas la beegsadeen ciidanka amaanka, ciidankuna uu ka jawaabay rasaastaa. Warkaa Wasiirka daakhiligu wuxuu intaa ku daray inay rabshadahaa ku dhaawacmeen 9 qof oo uu ku jiro sarkaal ciidanka amaanka ka tirsan oo lagu magacaabo Abuubakar Maxamuud Aadan. Qoraalkaa waxa kale oo lagu sheegay in la qabqabtay 7 qof oo lagu tilmaamay kuwii rabshadahaa soo abaabulay, isla markaana wasiirka daakhiliga ayaa ku tilmaamay falkaa mid looga dan lahaa in nabadgelyada Jabuuti lagu khalkhla geliyo, laguna kala qaybiyo shacabka, ayna soo abaabuleen kooxo uu ku sheegay inay xidhiidh la leeyihiin kooxo ku sugan dibadaha. Wasiirku wuxuu ugu baaqay shacabka Jabuuti inay nabadgelayada ilaaliyaan. Warkaasi wuxuu intaa ku daray in rabshadu ka dhacday xaafadda Belbela. Dhawaan ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sheegay inuu mar afraad u taagan yahay doorashada madaxtinimadda, taasoo uu xusay inay ku keliftay codsi dhanka dadkiisa uga yimi. Hase yeeshee mucaaradka Jabuuti oo lagu tilmaamo mid wayd ah oo taag daran, ayaa talaabaddaa ku tilmaamay mid aan la aqbali Karin, dadkuna aanay doonayn xorriyadna aanay hadlin, isla markaana rabshadahan ayaa salka ku haya isdiidkaa siyaasaddeed siday labada masuulba qireen.